Ururka Al-shabaab oo dib isaga waabiyey weerar ay soo qaadeen ciidanka huwanta
Jowhar:-Warar lagu kalsoon yahay oo aan ka helnay ilo wareed ku sugan gobalka Sh/dhexe ayaa sheegaya in saaka ciidamada AMISOM iyo kuwa DFS oo qorsheynayey in ay weeraraan magaalada Jowhar ee xarunta gobalka Sh/ dhexe ay joogsadeen ka dib markii ay weerar kala hortageen ciidamada Al-Shabaab.
Ciidanka Al-Shabaab ayaa wadada u galay ciidamo sahan ah oo ka socday kuwa AMISOM iyo kuwa DFS waxaana dagaal culus uu ku dhexmaray laba dhinac duleedka deegaanka Booroow ee Gobalka Shabeelaha Dhexe . Ciidamada AMISOM iyo kuwa DFS ayaa ka gurtay duleedka Booroow ee Gobalka Shabeelaha Dhexe halka ciidamada Al-shabaab ay difaac ka xirteen deegaanka Booroow iyo Congo Gobolka Shabeelaha Dhexe .
Wararka ugu danbeeyey aan ka helayno gobalka Shabeelaha Dhexe ayaa sheegaya in gurmad badan uu soo gaaray labada dhinac lagana cabsi qabo in dagaal culus uu dib u qarxo maalinta birito ah.
Dadweynaha ku dhaqan magaalada Jowhar ee xarunta Shabeelaha dhexe ayaa sheegayaa inay ka cabsi qabaan in dagaalka uu ku soo fido gudaha magaalada Jowhar. Sarkaal ka tirsan DFS ayaa sheegay in ay weerar qaadeen ciidamada ka tirsan DFS iyo AMISOM deegaanka Booroow wuxuuna ku faanay in ay qabsadeen oo ay ka saareen Ururka Al-Shabaab.